बेहुला बेपत्ता भएपछि बेहुलीले जन्ती आएको केटासँग बिहे « Sagarmatha Daily News
बेहुला बेपत्ता भएपछि बेहुलीले जन्ती आएको केटासँग बिहे
छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा अनौठो घटना भएको छ । बिहे समारोहबाटै बेहुला बेपत्ता भएपछि अप्ठेरोमा परेकी बेहुलीले जन्ती आएको एकजना युवकसँगै बिहे गरेकी छिन् ।
यो हो संसारकै महंगो फल : एउटा दानाको मूल्य १६ लाख रुपैयाँ !
काठमाडौं । संसारमा अनेक खालका फलफूल पाइन्छन् जसको मूल्य पनि थरीथरी हुन्छ । जापानमा पाइने
सी, मोदी र ओलीः उस्तै विचार, उस्तै शैली
यी हुन् तीन नेताका ८ समान विशेषता उसो त नेपालका सबै मूलधारका पार्टीहरुमा कुनै न
रक्सी जति पियो उति पिऊँपिऊँ किन हुन्छ?
रक्सी जति पियो उति पिऊँपिऊँ किन हुन्छ ? बैज्ञानिकहरुले यसबारे अध्ययन् गरेका छन् । सो
एजेन्सी । अमेरिकामा डाक्टरहरुले एक व्यक्तिमा सुंगुरको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका छन् । अमेरिकी डाक्टरहरुले सुंगुरको